Iindaba -Iindaba zeCCTV zidwelise imfumba yokutshaja njengenye yeendawo ezisixhenxe eziphambili zokwakha iziseko zophuhliso.
Isishwankathelo: ngoFebruwari 28, 2020, inqaku elithi "lixesha lokuqala umjikelo omtsha wolwakhiwo lwezibonelelo" ekhutshwe, nebangele ingqwalaselo ebanzi kunye nengxoxo "ngezixhobo ezitsha" kwintengiso. Emva koko, iindaba zeCCTV zidwelise imfumba yokutshaja njengenye yeendawo ezisixhenxe eziphambili zokwakha iziseko zophuhliso.
1. Imeko yangoku yokutshaja imfumba
Iziseko zophuhliso ezitsha zijolise kakhulu kwisayensi nakwitekhnoloji, kubandakanya ukwakhiwa kwesikhululo se-5g, i-UHV, uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu kunye nokuhamba komgaqo kaloliwe, amandla amatsha okutsha kwezithuthi, iziko ledatha enkulu, ubukrelekrele bokuzenzela kunye ne-Intanethi yoshishino. Njengoncedo lwezixhobo zamandla ezithuthi zombane, ukubaluleka kokutshaja imfumba akunakuhoywa.
Ukuphuhliswa kwezithuthi zamandla amatsha kuphela kwendlela yeTshayina yokufuduka isuke kwilizwe elikhulu lezithuthi iye kwilizwe elinemoto elinamandla. Ukukhuthaza ukwakhiwa kwezixhobo zokutshaja sisiqinisekiso esinamandla sokuphunyezwa kwesi sicwangciso. Ukusuka kwi-2015 ukuya kwi-2019, inani leemfumba zokutshaja e-China lenyuke ukusuka kwi-66000 ukuya kwi-1219000, kwaye inani lezithuthi ezitsha zamandla lenyuke ukusuka kwi-420000 ukuya kwi-3.81 yezigidi kwangelo xesha, kwaye umlinganiso ohambelana nemfumba yezithuthi wehlile ukusuka ku-6.4: 1 ngo-2015 ukuya 3.1: 1 ngo-2019, kwaye izixhobo zokutshaja zaphuculwa.
Ngokwedrafti yesicwangciso esitsha sophuhliso lwamashishini ezithuthi (2021-2035) esikhutshwe liSebe lezolimo kunye netekhnoloji yolwazi, kuqikelelwa ukuba inani lezithuthi ezitsha zamandla eTshayina liya kufikelela kwizigidi ezingama-64.2 ngo-2030. yenqwaba yemoto ye-1: 1, kukho umsantsa wezigidi ezingama-63 kulwakhiwo lokufumba imfumba eTshayina kule minyaka ilishumi izayo, kwaye kuqikelelwa ukuba yi-1.02 yezigidi zezigidi zeerandi yokuhlawulisa imakethi yokwakha iziseko.
Ukuza kuthi ga ngoku, izigebenga ezininzi zingene kwicandelo lokutshaja imfumba, kwaye isenzo "sokuzingela" kwixesha elizayo siqale ngendlela ejikelezayo. Kweli dabi "lokujonga imali", i-ZLG isebenze nzima ukubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kumashishini ahlawulisa iimoto.
2. Ukuhlelwa kweendawo zokubiza
1. AC imfumba
Xa amandla okutshaja engaphantsi kwe-40kW, ukuphuma kwe-AC kwimfumba yokutshaja kuguqulwa kwaba yi-DC ukubiza ibhetri yebhodi ngetshaja yesithuthi. Amandla amancinci kwaye isantya sokutshaja sicotha. Ifakwa ngokubanzi kwindawo yokupaka yabucala yoluntu. Okwangoku, uninzi lwamatyala kukuthenga izithuthi zokuthumela iimfumba, kwaye ulawulo lwendleko lwenqwaba iphelele ngokungqongqo. Imfumba ye-AC ibizwa ngokuba yipile yokutshaja kancinci ngenxa yendlela yayo yokutshaja ecothayo.
Amandla okutshaja e-DC eqhelekileyo yi-40 ~ 200kW, kwaye kuqikelelwa ukuba umgangatho ogqithisileyo uya kukhutshwa ngo-2021, kwaye amandla anokufikelela kwi-950kw. Imveliso yangoku ethe ngqo evela kwimfumba yokutshaja ihlawulisa ngokuthe ngqo ibhetri yesithuthi, esinamandla aphezulu kunye nesantya sokutshaja ngokukhawuleza. Ifakwa ngokubanzi kwiindawo zokutshaja ezisembindini ezinje ngezitishi ezitshoyo kunye nezikhululo zokutshaja. Uhlobo lokusebenza luqinile, olufuna inzuzo yexesha elide. Imfumba ye-DC inamandla aphezulu kunye nokutshaja okukhawulezayo, okwabizwa ngokuba yimfumba yokutshaja ngokukhawuleza.
3. I-ZLG izimisele ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo zeendawo zokutshaja
Yasekwa ngonyaka ka-1999, i-Guangzhou Ligong Technology Co., Ltd. ibonelela ngezisombululo ze-IOT ezikrelekrele zabasebenzisi bemizi-mveliso kunye nezezithuthi, ukubonelela abathengi ngobuchwephesha bobuchwephesha kunye neenkonzo kuwo wonke umjikelo wobomi bemveliso ukusuka kuvavanyo lokhetho, uphuhliso kunye noyilo, ukuvavanywa kunye nokuqinisekiswa kobunzima imveliso anti-yomgunyathi. IZhabeu iziseko zophuhliso, iZLG ibonelela ngesisombululo esifanelekileyo sokutshaja.
1. Imfumba yokuhamba
AC inqwaba inobunzima obuphantsi bobuchwephesha kunye neemfuno zexabiso eliphezulu, ikakhulu kubandakanya iyunithi yolawulo yokutshaja, itshaja kunye neyunithi yonxibelelwano. Isitokhwe sangoku kunye nokunyuka okulandelayo ikakhulu kuvela ekuthengweni kweemoto, ikakhulu kwimveliso yemoto exhasa. Uphando kunye nophuhliso yonke mfumba ukutshaja kubandakanya self-isifundo mveliso isithuthi, iindawo ezixhasa amashishini mveliso isithuthi kunye namancedo axhasa kwishishini wokutshaja mfumba.
Imfumba ye-AC ngokusisiseko isekwe kuyilo lwe-ARM ye-MCU, enokuhlangabezana neemfuno zomsebenzi. I-ZLG inokubonelela ngombane, i-MCU, iimveliso zemodyuli zonxibelelwano.
Umzobo webhloko oqhelekileyo uboniswe ngezantsi.
Inkqubo ye-DC (inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza) inkqubo inzima kakhulu, kubandakanya ukubonwa kukarhulumente, ukutshaja ukutshaja, ukutshaja ulawulo, iyunithi yonxibelelwano, njlnjl. Okwangoku, iingxilimbela ezininzi kufuneka zibambe imakethi zikhuphisane nomhlaba, kwaye isabelo sentengiso kufuneka sibe idityanisiwe.
I-ZLG inokubonelela ngebhodi engundoqo, i-MCU, imodyuli yonxibelelwano, isixhobo esisemgangathweni kunye namanye amathuba.
4. Ixesha elizayo lokutshaja imfumba
Ngaphantsi kokuzingelwa kwezigebenga, ishishini lokutshaja lihamba notshintsho olukhulu. Ngokombono wendlela yophuhliso, ayinakuphepheka ukuba inani leemfumba zokutshaja ziya zisanda, iimodeli zeshishini ziya kulaliswa ngaphezulu, kunye nezinto ze-Intanethi ziya kudityaniswa.
Nangona kunjalo, ukuze babambe imarike kwaye babambe intsimi, uninzi lweengxilimbela zilwa ngendlela yazo, ngaphandle kwengcinga "yokwabelana" kunye "nokuvula". Kunzima ukwabelana ngedatha kunye nomnye. Nokuba imisebenzi yokunxibelelana yokutshaja kunye nentlawulo phakathi kweengxilimbela ezahlukeneyo kunye neeapps ezahlukeneyo azikazaliseki. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho nkampani ikwazileyo ukudibanisa idatha efanelekileyo yazo zonke iimfumba zokutshaja. Oku kuthetha ukuba akukho mgangatho ofanayo phakathi kokutshaja iimfumba, ekunzima ukuhlangabezana neemfuno zokusetyenziswa. Kunzima ukuqulunqa imigangatho emanyanisiweyo, engenzi nje kuphela ukuba kubenzima kubanini beemoto ukonwabela amava okutshaja ngokulula, kodwa kukonyusa notyalo mali kunye neendleko zexesha lokuhlawulisa izigebenga.
Ke ngoko, isantya sophuhliso kunye nempumelelo yexesha elizayo okanye ukungaphumeleli kweshishini lokutshaja lokumisela kumiselwa ukuba ingaba umgangatho odityanisiweyo unokwenziwa kangangoko.